ယူနိုကျတကျက ဗနျဒီဘိချကို မလိုအပျပဲ ဘာကွောငျ့ဝယျခဲ့တာလဲ မသိဘူးလို့ မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ နောကျခံလူဟောငျး အီဗရာ – Myan Ball
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဗနျဒီဘိချကို ပေါငျသနျး ၄၀ နဲ့ မလိုအပျပဲ ချေါယူခဲ့တယျလို့ နောကျခံလူဟောငျး အီဗရာက ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ဂိုးမရှိသရပှေဲအပွီးမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဗနျဒီဘိချကို နညျးပွ ဆိုးလျရှားက နှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ပွောငျးရှကွေ့ေး အမြားဆုံးသုံးပွီး ချေါယူထားပမေယျ့ ယခုအခြိနျအထိ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပှဲထှကျ (၁၁) ယောကျအသငျးမှာ ပါဝငျကစားခှငျ့မရသေးပဲ အရနျအဖွဈသာ စုစုပေါငျး မိနဈ (၆၀) ကစားရသေးတာ ဖွဈပါတယျ။
ဆိုးလျရှားရဲ့ ကှငျးလယျမှာ ရှေးခယျြစရာမြားနပွေီး ခြဲလျဆီးနဲ့ ပှဲမှာလညျး တှမျမီနေး နဲ့ ဖရကျဒျတို့ကို ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈနဲ့ တှဲပွီး ပှဲထှကျကစားစခေဲ့ပါတယျ။ ပေါ့ဘာက အရနျခုံမှာ ထိုငျခဲ့ရသျောလညျး ဗနျဒီဘိချလိုမဟုတျပဲ ပွငျသဈကစားသမားက ဒုတိယပိုငျးမှာ ဝငျကစားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
အီဗရာက အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျကစားသမားကို ချေါယူခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ပှဲအပွီးမှာ မေးခှနျးထုတျလိုကျပါတယျ။ သူက “ကြှနျတျောတို့ ဟာ ဗနျဒီဘိချကို မကောငျးပွောနတောတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ သူ့ကို အသငျးက ချေါခဲ့တာလဲ? သူဟာ ပှဲတိုငျ ပှဲကွညျ့စဉျကနေ ကွညျ့နရေပါတယျ။ သူ့ကို ကြှနျတျောတို့ မလိုပါဘူး။ ဒါက အမှနျပါ” လို့ စကိုငျးစပေါ့ သတငျးဌာနကို ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဗနျဒီဘိချဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ဒီရာသီမှာ ကာရာဘောငျဖလား ပှဲတှဖွေဈတဲ့ လူတနျ အသငျးနဲ့ ဘရိုကျတနျအသငျးတို့ နဲ့ပှဲမှာ ပှဲထှကျကစားထားပါတယျ။
ယူနိုက်တက်က ဗန်ဒီဘိခ်ကို မလိုအပ်ပဲ ဘာကြောင့်ဝယ်ခဲ့တာလဲ မသိဘူးလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာ
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပေါင်သန်း ၄၀ နဲ့ မလိုအပ်ပဲ ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ နောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာက ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ဂိုးမရှိသရေပွဲအပြီးမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်ကို နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး အများဆုံးသုံးပြီး ခေါ်ယူထားပေမယ့် ယခုအချိန်အထိ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲထွက် (၁၁) ယောက်အသင်းမှာ ပါဝင်ကစားခွင့်မရသေးပဲ အရန်အဖြစ်သာ စုစုပေါင်း မိနစ် (၆၀) ကစားရသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ ရွေးချယ်စရာများနေပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ ပွဲမှာလည်း တွမ်မီနေး နဲ့ ဖရက်ဒ်တို့ကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ တွဲပြီး ပွဲထွက်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဘာက အရန်ခုံမှာ ထိုင်ခဲ့ရသော်လည်း ဗန်ဒီဘိခ်လိုမဟုတ်ပဲ ပြင်သစ်ကစားသမားက ဒုတိယပိုင်းမှာ ၀င်ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အီဗရာက အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ကစားသမားကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပွဲအပြီးမှာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူက “ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဗန်ဒီဘိခ်ကို မကောင်းပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် သူ့ကို အသင်းက ခေါ်ခဲ့တာလဲ? သူဟာ ပွဲတိုင် ပွဲကြည့်စဉ်ကနေ ကြည့်နေရပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ မလိုပါဘူး။ ဒါက အမှန်ပါ” လို့ စကိုင်းစပေါ့ သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ဒီရာသီမှာ ကာရာဘောင်ဖလား ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ လူတန် အသင်းနဲ့ ဘရိုက်တန်အသင်းတို့ နဲ့ပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားထားပါတယ်။